सूर्या लाइफको ८७ हजार कित्ता हकप्रद बिक्री खुल्यो, कहाँवाट दिने आवेदन ? « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
काठमाडौं । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सोमबारदेखि १० बराबर ४ को अनुपातमा हकप्रद सेयरको बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले एक सय अंकित मूल्यका २८ लाख ८७ हजार ५०० कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशन गरेको हो । बैशाख ४ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम साविक शेयरधनीहरुले यस हकप्रदमा असार ३ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।
हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ७२ करोड १८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । हकप्रद निष्कासन तथा बाँडफाँड पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी एक अर्ब एक करोड ६ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । जीबन बीमा कम्पनीले बीमा समितिको निर्देशन अनुरूप २०७५ असार मसान्तसम्म दुई अर्ब पूँजी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि हकप्रद पश्चात कम्पनीले ९९ करोड थप पूँजी विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।